China mejupụtara SMC BMC haịdrọlik pịa Manufacture na Factory | Ekechukwu
Anyị haịdrọlik pịa igwe na-adabara mejupụtara ihe onwunwe ịkpụzi:
SMC (Mpempe Akwụkwọ Mkpụzi) ihe mejupụtara
BMC (Bulk Molding Compound) ihe
RTM (Resin Nyefee Nkedo) components
A na-eji usoro dị iche iche eme ihe, dabere na akụrụngwa chọrọ na usoro mmepụta. Nsonaazụ: Akụkụ kachasị mma yana nrụpụta nrụpụta kachasị elu - maka arụmọrụ akụ na ụba na arụpụta ihe kacha elu.
ZHENGXI SMC BMC Hydraulic Press na-akpọkwa haịdrọlik composites ịkpụzi pịa, ọ na-etinyere na mkpakọ ịkpụzi nke ọtụtụ ihe onwunwe dị ka SMC, BMC, FRP, GRP na na. Anyị SMC akpụ presses na pịa na-enye ọtụtụ ihe mejupụtara ụlọ ọrụ superiour mmepụta ike, yana idozi na nweta nkwalite nhọrọ. Anyị na-enye igwe nrụpụta hydraulic ọhụrụ ọhụụ, na ZHENGXI aslo na-enye ndepụta zuru ezu nke ndozi na nwelite nhọrọ maka mkpakọ mkpakọ na-arụ ọrụ nke ụdị na ụdị niile. Anyị haịdrọlik ịkpụzi presses na-iji na-emepụta ọtụtụ dịgasị iche iche nke otutu akpakanamde, aerospace, ulo oru wdg
Is A na-ejikarị ya eme ihe maka ihe plastik na ngwaahịa thermoplastic. Adabara na-akpụ nke SMC, BMC, DMC, GMT na ndị ọzọ na bulks na Ibé akwụkwọ.
 A na-etinye usoro sistemụ n'elu n'elu ikpo okwu na-arụzi ọrụ, gburugburu ebe obibi, obere mkpọtụ na nhazi dị mfe.
UlMultiple-ogbo ngwa ngwa ọsọ mgbali akpụ, ezi uche echekwara iyuzucha oge.
With ọrụ nke nnukwu nrụgide na-adịghị ngwa oghere, kwesịrị ekwesị maka ngwaahịa dị elu.
Za ngwa ngwa nke usoro, usoro nchịkwa onu ogugu.
Na Foto dị na saịtị
Igwe a kachasị mma maka ihe eji emepụta ihe; akụrụngwa nwere ezigbo nkwụsi ike na oke nkenke, ndụ dị elu na ntụkwasị obi dị elu. Usoro maka ikpo ọkụ na-akpụ ọkụ na-ezute mgbanwe 3 / mmepụta ụbọchị.
JB / T3818-99 《Nka na ụzụ ọnọdụ nke haịdrọlik pịa》
JB / T8609-97 《Press ígwè ịgbado ọkụ oru ọnọdụ》
Ihe osise 3D
Framedị ụdị H
4 ụdị kọlụm
Mtem Nkeji YZ71-4000T YZ71-3000T YZ71-2500T YZ71-2000T YZ71-1500T YZ71-1000T
Nrụgide kN 40000 30000 25000 20000 15000 10000
Max. mmiri mmiri mgbali Mpa 25 25 25 25 25 25
Ìhè Mm 3500 3200 3000 2800 2800 2600
Ọkụ Mm 3000 2600 2400 2200 2200 2000
Na-arụ ọrụ table size Mm 4000 × 3000 3500 × 2800 3400 * 2800 3400 * 2600 3400 * 2600 3400 * 2600
Ogologo ala Mm 12500 11800 11000 9000 8000 7200
Ntọala ntọala mm 2200 2000 1800 1600 1500 1400
Mgbada ala Mm / s 300 300 300 300 300 300
Speedgba ọsọ na-agba ọsọ Mm / s 0,5-5 0,5-5 0,5-5 0,5-5 0,5-5 0,5-5
Laghachi ọsọ Mm / s 150 150 150 150 150 150
Ike niile kW 175 130 120 100 90 60
A ga-eji ogidi ndị ahụ na-eduzi (ogidi) mee C45 ọkụ ibe ya bụrụ ígwè ma nwee nkpuchi mkpuchi mkpuchi chrome siri ike 0.08mm. Ma mee ọgwụgwọ ma na-ewe iwe. Uwe ntuziaka na-agbaso uwe ntuziaka ọla kọpa, nke na-adịgide adịgide ma na-eme ka nkwụsi ike nke igwe ahụ dịkwuo mma
Nke gara aga: H etiti metal miri ịbịaru haịdrọlik pịa
Ebu okpomọkụ njikwa (oyi, na-ekpo ọkụ)